TAARIIKH NOLOLEEDKA MUDANE: FARMAAJO
Home / TAARIIKH NOLOLEEDKA
TAARIIKH NOLOLEEDKA MUDANE:Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Maxamed Cabdullaahi “Farmaajo” waxaa loo magaacaabay Ra’iisul Wasaare sanadku markuu ahaa 2010-kii ayadoo ay si aqlabiyad ah 297 cod ku ansixiyeen Golaha Shacabka Soomaaliyeed, Maxamed Farmaajo wuxuu Raysal Wasaare ahaa ilaa iyo sanadku markuu ahaa 2011-kii.
Intuu xilka hayay, Farmaajo wuxuu Soomaaliya u horseeday dowlad yar oo tayo leh, wuxuu nadaamiyay hanaankii dowladnimo, wuxuu kusoo koobay golaha wasiirada 18, halka dowladdii ka horreysay ay ahayd 39 wasiir, waxaa kale oo uu dib u habayn ku sameeyey laamaha dowladda isagoo kor u qaaday furfurnaanta lana diriray musuqmaasuqa.
"Waxaan muhiimadda koowaad siinayaa abuurida olole lagula dagaalamayo amni-darrada iyo faqriga "
Wuxuu hirgaliyay markii ugu horeysay iney golaha wasiirada caddeeyaan hantidooda gaarka ah oo ay saxiixaan xeerka anshaxa. Waxaa kale oo uu magacaabay Guddiga la dirirka Musuqmaasuqa awoodna u siiyey iney si gaar ah u baaraan musuqmaasuqa.
Mudane Farmaajo wuxuu soo celiyey nabadgalyada, si karti lehna ula diriray argagaxisada Alshabab iyo Alqaacidada koonfurta Soomaaliya.
Xukuumadiisu waxay ku guuleysatay in laga xoreeyo Al-Shabaab caasimadda dalka ee Muqdisho, boqolkiiba sideetanna (80%) dadka la hooskeeno dowladnimada.
Markii ugu horeysay 20 sano kadib, waxaa aad loo xasuustaa in Mudane Farmaajo xasilooni kusoo dabbaalay dowladnimada Soomaaliyeed. Qareemo, xeeldheerayaalka dhaqanka iyo culimo ayuu u magacaabay gudiyada dastuuriga ah, wuxuuna dhidibada Soomaaliya ku duway waddadii lagu gaari lahaa dimoqraadiyad buuxda.
Mudane Farmaajo waa qofka kaliya ee u qalma inuu Soomaaliya ka saaro marxalada kala guurka gaarsiiyana nabadgelyo, horumar iyo dowalad daacad ah kana shaqaysa danta dadka iyo dalka, shacabkeeduna la xisaabtami karaan oo la tartanta dunida horay u martay.
1982- 1985 waxuu ka ahaa muumule wasaaradda arimaha dibadda, waxaa kale oo uu noqday xoghayaha koobaad ee Safaaradda Soomaliya ee Dalka Maraykanka
Dabayaaqadii sideetamaadkii, Farmaajo wuxuu ku nagaaday dalka Mareykanka. Labaatankii sano ee ugu danbeeyay kadib markii kartidiisa la ogaaday ayaa waxay keentay inuu xilal badan oo muhiima dowlada Mareykanka kasoo qabto, taas oo ay kamid tahay “Commissioner” ama gudoonka dhaqaale ee waaxda guriyeynta magaalada Buffalo (USA) iyo weliba maamulaha sinaanta shaqaalaha ee waaxda gaadiidka dowlad gobaleedka New York (USA).
Biloowgii sanadkii 2012, Mudane Farmaajo iyo qayb ka mid ah golihiisa wasiirada waxay aasaaseen xisbiga siyaasadeed ee Tayo si dalkeenna Soomaaliya loo dhiso looagana soo kabto dagaalkii sokeeye ee nadaashaday in badan.
Mudane Farmaajo waxa uu ka qaatay shahaadada Bachelor iyo Masters-ka University State ee New York (SUNY) ee Buffalo isagoo barana ka noqday xirfadaha hoggaanka iyo xallinta khilaafaadka kulliyadda Erie Community College.
Mudane Farmaajo iyo xaaskiisa Saynab Macallin waxay leeyihiin laba wiil iyo laba gabdhood oo u dhexeeya 13 jir ilaa 23 jir, Mudane Farmaajo wuxuu ku dhashay Muqdisho sanadku markuu ahaa 1962dii.